Football Khabar » इक्वेडरविरुद्ध भिड्ने अर्जेन्टिनाको प्लेइङ–११ सार्वजनिक : को–को परे ?
इक्वेडरविरुद्ध भिड्ने अर्जेन्टिनाको प्लेइङ–११ सार्वजनिक : को–को परे ?
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा अबको केहीबेरमै इक्वेडर र अर्जेन्टिना भिड्दैछन् । स्पेनमा हुन लागेको सो खेलका लागि अर्जेन्टिनाको प्लेइङ–११ सार्वजनिक भएको छ । प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले खेलको समयभन्दा केही घन्टाअघि नै सुरुआती टिम घोषणा गरेका हुन् । खेल नेपाली समयअनुसार राति ७ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आज इक्वेडरविरुद्ध लौटारो मार्टिनेजले आक्रमण लाइनमा सुरुआत गर्नेछन् । उनले अघिल्लो खेलमा २ गोल गरेका थिए । आज पनि गोल पोस्ट अगुस्टित मार्चिसने नै सम्हाल्नेछन् । आजको खेलमा स्टार फरवार्ड पाउलो डिबाला भने बेन्चमा रहने प्रशिक्षक स्कालोनीले पुष्टि गरेका छन् ।
डिफेन्डर – जाउन फ्योत, जर्मन पेजेल्ला, वाल्टर कान्नेमान, मार्कोस अकुन्ना
मिडफिल्डर – निकोलास गोन्जालेज, डे पाउल, लियान्ड्रो पारेडेश
फरवार्ड – लौटारो मार्टिनेज, लुकास ओकाम्पोस, लुकास अलारियो
प्रकाशित मिति २६ आश्विन २०७६, आईतवार १५:५५